Traveller Chan - ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ် ကိုးခု
1. Between 27th St. & 28th St. (Middel Block)
2. Between Shwe Bon Thar St. & 29th St. (Upper Block)
3. Between 30th St. & Bosoonpat St. (Upper Block)
4. Between Bosoonpat St. & 31st St. (Middel Block)
5. Between 31st St. & 32nd St. (Middle Block)
6. Between 33rd & 34th St. (Upper Block) - ဝဇီရာရုပ်ရှင်ဥယျာဉ်လမ်း
7. Between Maha Bandula Park St. & 35th St. (Upper Block)
8. Between Seikantah St. & 39th St. (Middel Block)
9. Between 41st St. & 42nd St. (Upper Block)
နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျဉ်ကိုးခုကို လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒို့အိမ်နဲ့ Artists တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ YGN Walls တို့က ဖန်တီးထားတာ။ အဓိကပါဝင်အားဖြည့်ထားတာကတော့ Volunteers တွေအနေနဲ့ ပါဝင်ပေးတဲ့ Artists တွေပါပဲ။ ဝဇီရာရုပ်ရှင်လမ်းကြားက YGN Walls က ဖန်တီးထားတာပါ။ ၄၁လမ်းနဲ့ ၄၂လမ်းကြားက ဒို့အိမ်နဲ့ YGN Walls ရဲ့ ပူးပေါင်းဖန်တီးမှုပါ။ ကျန်တဲ့ ၇နေရာက ဒို့အိမ်ရဲ့ ပရောဂျက်တွေပါ။ နောက်ထပ်လည်း ပရောဂျက်တွေ ထပ်လုပ်သွားဖို့ ရာထားတယ်ဆိုတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့ ဖလန်းဖလန်းဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်တွေအကြိုက်ပေါ့နော်။
တကယ်တန်း စဉ်းစားကြည့်ရင်လေ အိမ်ခြေထူထပ်ပြီး မြေနေရာရှားပါးနေတဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားနေရာလွတ်တွေက အမှိုက်တွေနဲ့ အလဟသ ဖြစ်နေတာ။ အမှိုက်တွေဆိုတာ ဒင်းကြမ်းပြည့်၊ မိလ္လာပိုက်တွေကပေါက်၊ အနံ့ဆိုးကတလှိုင်လှိုင်၊ ကြွက်တွေကပေါနဲ့… စက်ဆုတ်စရာကြီး။ ဟော… ခုတော့ အဲ့သည့် အညစ်အစုတ်အပုပ်တွေကို ရှင်းထုတ်ပြီး ကလေးကစားကွင်း အငယ်စားလေးတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းအသေးစားလေးတွေ လုပ်လာကြတာ ဘယ်လောက်ကြည်နူးဖို့ ကောင်းသလဲ။ ပရောဂျက်တစ်ခုမှာ Theme တစ်မျိုးသတ်မှတ်ပြီး Artists တွေက နံရံတွေပေါ်မှာ ပန်းချီတွေဆွဲထားတာ ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ ကောင်းသလဲ။
Recommend ပေးချင်တာကတော့ နိဒါန်းမှာ ပြောခဲ့သလို သုံးနေရာတည်းပါ။ အချို့လမ်းတွေမှာ အမှိုက်တွေပြန်ရှိနေပါတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာကျတော့ နံရံပန်းချီတွေပေါ်မှာ ညစ်ညမ်းအောင် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ကြီးပြင်းရလို့ အဖျက်အဆီးလုပ်ရတာ ပျော်နေသလဲ မသိပေမယ့် ဘဝက မလှပရင်တောင် စိတ်ဓာတ်လေးတော့ လှအောင်နေပေးကြပါလို့ ဆိုရင်း တော်သေးပြီ။
Between 27th St. & 28th St. (Middel Block)
Between Shwe Bon Thar St. & 29th St. (Upper Block)
Between 30th St. & Bosoonpat St. (Upper Block)
Between Bosoonpat St. & 31st St. (Middel Block)
Between 31st St. & 32nd St. (Middle Block)
Between 33rd & 34th St. (Upper Block) - ဝဇီရာရုပ်ရှင်ဥယျာဉ်လမ်း
Between Maha Bandula Park St. & 35th St. (Upper Block)
Between Seikantah St. & 39th St. (Middel Block)
Between 41st St. & 42nd St. (Upper Block)
မှတ်ချက်။ ။ လွတ်လပ်စွာ Share နိုင်ပါသော်လည်း ကျေးဇူးပြုပြီး ပေ့ခ်ျများမှ ပုံအားလည်းကောင်း၊ စာအားလည်းကောင်း၊ ပုံနှင့်စာအားလည်းကောင်း ကူးယူဖော်ပြခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Chan Myae Ei - #travellerchan
#doheain #ygnwalls #streetart #wallart #yangon #travel #travelblog